नेपाली कांग्रेसको आरक्षण तर्फका निर्वाचित सदस्यहरुको घोषणा - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | २९ फाल्गुन २०७२, शनिबार १४:५४ |
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको खुलातर्फको केन्द्रीय सदस्यहरुको मतगणनामा डा. शेखर कोईराला सवैभन्दा अगाडि छन् । मतगणना सोमवारसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
शनिवार साँझसम्मको मतगणनामा कोईराला सवै भन्दा अगाडी हुनुहन्छ । त्यस्तै गरी प्रकाशमान सिंह, खुमबहादुर खड्का, प्रदिप पौडेल, विमलेन्द्र नीधि, पूर्णबहादुर खड्का लगाएतका नेताहरु रहनुभएका छ । अहिलेसम्मको मतगणनामा अधिकांश पूरानै अनुहारहरु अग्रपङक्तिमा देखिएका छन् ।
यसै गरी आदिवासी जनजातितर्फ चिनकाजी श्रेष्ठ,बहादुरसिंह लामा र कल्याण गुरुङ निर्वाचित हुनुभएको छ । यसै महिला कोटाको केन्द्रीय सदस्यमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका ४ जना र रामचन्द्र पौडेल पक्षका २ जना निर्वाचित भएका छन् । शनिबार साँझ सकिएको मतगणनाबाट देउवा पक्षका डा. डिला संग्रौला, पुष्पा भुषाल, इश्वरी न्यौपाने र अम्बिका बस्नेत निर्वाचित हुनुभएको हो । पौडेल पक्षका कमला पन्त र सरिता प्रसाईं पनि महिला कोटाको केन्द्रीय सदस्यमा विजयी हुनुभएको छ । केन्द्रीय सदस्यको दलित महिला कोटामा भने लक्ष्मी परियार र सुजाता परियार निर्वाचित हुनुभएको छ ।
यस्तै मधेसी पुरूष तर्फको सिटमा अजय चौरसिया, महेन्द्र यादब र रामकृष्ण यादव विजयी हुनुभएको छ भने मधेसी महिला तर्फ किरण यादब र पार्बता डिसि चौधरी विजयी हुनुभएको छ ।
यता पछिल्लो मतगणनामा महिला केन्द्रीय सदस्यतर्फ डिला संग्रौला सवैभन्दा अगाडि देखिनुभएको छ । पुष्पा भुषाल,कमला पन्त, अम्विका बस्नेत,ईश्वरी न्यौपाने क्रमैसंग रहनुभएको छ । दुई उम्मेदवार निर्वाचित हुने आदिवासी महिला केन्द्रीय सदस्यतर्फ सीता गुरुङ शीर्ष स्थानमा हुनुहुन्छ । ललिता किङरिङ मगर,रत्न शेरचन क्रमैसंगै रहनुभएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरुको पूर्ण परिणाम सोमवारसम्म आउने निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
Previousअष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली र अष्ट्रेलियन सेनाबीच भीडन्त हुने पक्का
Nextअर्को विमल चम्किदा सिमरा गोल्डकपको उपाधि हेटौंडाको कब्जामा
यस्तो हुनेछ एसएलसीको ग्रेडसिट
१८ जेष्ठ २०७३, मंगलवार ०२:३०
देशव्यापी भण्डाफोर गर्दै एमाले : आज काठमाडौंमा बृहत् भेला
२६ फाल्गुन २०७३, बिहीबार ०२:१९
हरिबंश आचार्यलाई बसको ठक्कर
१७ चैत्र २०७३, बिहीबार १०:४८
ह्वात्तै घटे कतार जाने कामदार
१२ असार २०७४, सोमबार ०१:५६